Nkọwapụta |lọ ọrụ | Shanghai Sunshine Teknụzụ Co., Ltd.
Ndi otu ndi otu mba di iche-iche meputara site na ndi otu 50 nke otutu ihe omuma na CMOS-MEMS sensor na nhazi usoro, Sunshine na-enye ndi ahia ihe bara uru nke oma na oru, nha na mmekorita. Ngwaahịa ihe mmetụta IR webatara na-eduga COMS-MEMS isi-usoro na ezigbo ntụkwasị obi & nkwụsi ike gụnyere ihe mmetụta okpomọkụ na-abụghị kọntaktị, ihe mmetụta NDIR, ihe mmetụta eserese ọkụ, yana mmekọrịta mmadụ na igwe.
Sunshine na-enwe mmekọrịta chiri anya na ndị ahịa na nka na ụzụ teknụzụ IR na ngwaahịa na ihe ngwọta iji mee ka ndị ọrụ nwee ike ịnwetanwu, na-agbanwe agbanwe ma dịkwa ọnụ ala. Ngwa ọrụ ihe mmetụta IR nke ọhụụ nke Sunshine nwere nnukwu pọtụfoliyo na-enye ndị ahịa ohere inweta ụdị ahịa dị iche iche na ngwa ngwa na-eto ngwa ngwa dị ka ngwaọrụ amamịghe, teknụzụ eletriki na teknụzụ ike na-acha akwụkwọ ndụ, ma rụpụta arụmọrụ ka mma dị ka eziokwu ka mma, obere akụkụ nke akụkụ, obere usoro oghere na ọnụ ala.
Ọdịdị imewe Sunshine na itinye ego na R&D na-aga n'ihu na-emesi arụmọrụ na ogo ngwaahịa ike ma ọ bụ karịa nke ndị na-eweta ihe mmetụta IR n'elu ụwa. Ogo na ntụkwasị obi dị na ndepụta kachasị mkpa na Sunshine n'oge niile. Sunshine na-agba mbọ ịbụ otu n'ime ụwa na-eduga ndị na-eweta ihe mmetụta IR site na ịre ndị ahịa ngwaahịa na ọrụ kacha mma. Ya mere, ọ bụ iwu ma ọ bụrụ na Sunshine na-aga n’ihu na-eme ka teknụzụ anyị na sistemụ arụmọrụ na-aga n’ihu na-aga n’ihu izute ma gafere atụmanya ndị ahịa.